Saddex qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSaddex qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe
November 29, 2017 Puntland Mirror Puntland 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay hal qof oo kalena waa uu ku dhaawacmay shil gaari, sida ilo-wareedyo caafimaad ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Shilka ayaa ka dhacay saq dhexe xalay wadada laamiga ah ee u dhaxaysa Garoowe iyo tuulada Laanta-hawada.
Gaari noociisu ahaa X-Trail ayaa shilka galay, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Waxaa jiray shilal is xig xigay oo ka dhacay gudaha Puntland, oo ay sababaeen waddo xumo iyo khibrad la’aanta darawalnimada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Janaraal Stephen J. Townsend ayaa maanta oo Jimce ah la wareegay xafiiska, isaga oo hoggaamin doona taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Townsend ayaa sheegay in uu safarkiisa ugu horeeya uu [...]